15 -ka DJM ee ugu Mushaharka Badan Dunida | Ganacsiyada
Bogga ugu weyn 15 DJs ee ugu mushaarka badan Dunida
Isha sawirka: www.djtechtools.com
DJs micnaheedu waa Jockeys. DJs waxaa loo yaqaanaa inay yihiin shaqsiyaad ka dhigta mid aad u xiiso badan dhageysiga muusikada. Taasi waa sababta ka dambaysa in laga helo naadi kasta, idaacad, ama telefishan.
Doorka ay DJ -yada ku leeyihiin warshadaha madadaalada lama soo koobi karo maaddaama ay tahay kaalin muhiim ah.
Ahaanshaha DJ waa mid ka mid ah xirfadaha lacag bixinta, dhalinyaro badanna waxay ka fikiraan.
DJs waxaa lagu yaqaanaa inay yihiin dad caan ah, xiddigo gudaha ah, waxayna leeyihiin dareemo caan ah.
Inaad noqoto kan ugu fiican warshadaha Disk Jockeys wuxuu ku baaqayaa shaqo adag, u heellan, edbin, iyo dhammaanteed, waa inaad ku dadaashaa waxaad rabto inaad sameyso. DJ -yada ayaa caan ku ah sameynta kulan kasta oo madadaalo ah sidaa darteedna waxay noqdeen qayb muhiim u ah dhacdo kasta.
Waa kuma DJ EDM?
EDM waxaa loola jeedaa Muusikada Qoob -ka -ciyaarka Elektaroonigga ah iyo EDM DJ waa DJ kasta oo soo saara muusigga elektiroonigga ah oo ku dhaca noocyo badan, oo ay ku jiraan guri, dubstep, teknoloji, cillad, dabin, miyir -qabad, koronto, iyo qaab -dhismeed adag.
Guud ahaan, muusigooda waxaa loogu talagalay dadka xiiseeya dhaqanka qoob -ka -ciyaarka ee naadiyada iyo goobaha xafladda.
Akhri: 15 Farshaxanka Tattoo ee Ugu Sarreeya | 2021
EDM DJs lacag fiican ma helaan?
Haa, EDM DJs si fiican ayaa loo bixiyaa. Tani waa kiiska maxaa yeelay Qoob -ka -ciyaarka Muusikada elektiroonigga ah ayaa caan ka ah maanta sidii hore ka hor sidaa darteed DJ -yada galay EDM waxay diiriyaan lacag aad u badan.
Waa imisa dakhliga EDM DJs?
Qaar ka mid ah DJ -yada ugu sarreeya EDM wuxuu kasban karaa boqolaal kun oo doollar hal set oo wuxuu samayn karaa malaayiin sanadkii.
Hal gig ayaa ka heli kara DJ joogto/yar meel kasta $ 1,000 ilaa $ 20,000. Kuwa waaweyn/kuwa caanka ah ee haddii kale loo yaqaanno kuwa ugu mushaarka badan EDM DJs waxay ka heli doonaan $ 20,000 illaa $ 100,000. Kuwa adduunku waxay jecel yihiin 10ka ugu sarreeya - $ 100,000 illaa $ 2,000,000. Chainsmokers waxay kasbadaan qiyaastii $ 200,000 gig kasta.
Sida loo noqdo DJ EDM
Si aad u noqoto EDM DJ waa inaad raacdaa talaabooyinka soo socda si guud:
1. Dhis Dejintaada DJ
Hel laptop si aad u isticmaasho oo ah mid la qaadan karo oo si fudud loo guuri karo.
Dooro software DJ si aad u bilowdo
Iibso lammaane dhego-dheg ah oo tayo leh
Xulo faylasha EDM MP3 si aad u abuurto maktabad muusig.
Dooro kuwa ku hadla kormeeraha si muusiggaaga loo maqlo.
2. Hone Your xirfadaha DJ
Baro sida loo isticmaalo softiweerka iyada oo loo marayo tijaabinta heesaha.
Ku tababar kala -guurka heesaha
Adeegso EQ si aad ugu abuurto dhawaq ka fiican isku darkaaga.
Baro DJ -yada kugu dhiirrigeliya inaad wax ka barato
Eeg ilaha internetka caawimaad, haddii loo baahdo.
3. Balaadhi Dadkaaga
Calaamadee naftaada adiga oo dooranaya magac DJ oo gaar ah.
Ka dhig inaad ka soocdo DJ -yada kale.
Naftaada ku suuq gee baraha bulshada.
Gaarsii goobaha ku xeeran magaalada si aad u ogaato inay kuu oggolaan doonaan inaad ciyaarto.
La xiriir dadka meelaha bandhigyada iyo goobaha.
Goobta Wealth (TWC) wuxuu kuu keenayaa, 15 EDM DJ ee ugu mushaarka badan adduunka oo ay ku jiraan
Qiimaha saafiga ah: $ 300M
Mushaharka: $ 50 Milyan
Noocyada: qoob-ka-ciyaarka, EDM, elektiroonigga, nu-disko, guriga korontada, Eurodance
DJ ugu taajirsan/ ugu qanisan adduunka 2021 waa Calvin Harris.
Harris waa Scottish DJ iyo heesaha caanka ah, qoraaga heesaha, iyo soo saaraha duubista sida ka mid ah EDM DJ ee ugu mushaarka badan adduunka. Waxa uu u sharaxnaa wadar ahaan 118 abaalmarin.
Sannadkii 2015, waxaa lagu dhawaaqay inuu yahay Fanaanka 30aad ee ugu taajirsan British -ka by Sunday Times. Wuxuu qaataa mushahar dhan $ 50M.
Calvin Harris wuxuu sameeyay tiro kaligiis ah oo qaarkood la yaqaan waxaa ka mid ah “Dareen”, “Tani waa waxa aad u timid”, “Waxaan helnay jaceyl”, “Dareen aad u dhow” iyo “xagaaga”.
Wuxuu ku guuleystay wadar ahaan 32 abaalmarin oo ay ku jiraan 1 Grammy Award, 2 American Music Awards, 4 MTV Video Music Awards, iyo 2 Brit Awards. Wuxuu leeyahay sumadda diiwaanka Fly Eye Records.
Albumkiisii ​​3 -aad, 18 bilood wuxuu fuulay jaantusyada Albums -ka UK isagoo ka dhigay kan ugu sarreeya, wuxuuna ahaa albumkii 1aad ee ka soo muuqda Mareykanka boor 200 ku darajo lambar 19.
Calvin Harris ayaa ugu sarreeya Liiska Forbes ee DJ-yada ugu mushaarka badan adduunka tan iyo 2013.
Qiimaha saafiga ah: $ 170M
Bixinta: $ 40M Milyan
Noocyada: guriga korontada, riyada, guriga horumarsan, guriga qoto dheer, guriga mustaqbalka, guriga qol weyn
Wuxuu ku dhashay Janaayo 17, 1969, Breda, Nederland, Tiësto waa DJ DJ oo ah soo saare duubis ah oo ka yimid Breda.
Sanado badan, wuxuu dhammaystiray farshaxankiisa, isagoo sidaas ku caddeeyay khibradiisa warshadaha DJ. Waana tan tan uu dhawaan ugu codeeyay DJ -kii ugu weynaa ee abid by majaladda Mix.
Wuxuu leeyahay barnaamij raadiye oo loo yaqaan Nolosha Naadiga Tiësto Raadiyaha 538 ee Nederland oo la bilaabay Abriil 2007. Sidoo kale, waa mulkiilaha iyo aasaasaha Duubista Hole Madow.
Wuxuu kasbadaa dakhli sanadle ah oo dhan $ 40M sidoo kale wuxuu dakhli dheeraad ah ka sameeyaa ruqsadda muusiggiisa iyo iibinta badeecadaha.
Sannadkii 2014, nooca dib -u -habeyntiisa ee “Dhammaan aniga” oo uu qoray John Legend Tiesto ayaa ku guuleystay Abaalmarinta Grammy ee duubista ugu wanaagsan ee dib loo habeeyay, Aan caadi ahayn.
Sannadkii 2018, Tiesto waxaa la geliyay kaalinta 8aad ee Billboard Dance 100 darajaynta muusikada qoob ka ciyaarka.
Halkiisii ​​cinwaan looga dhigay "Jackie Chan" ayaa la siidaayay bishii Luulyo 2018 waxaana lagu soo bandhigay Post Malone, Dzeko, iyo Prime.
Akhri: 20 Qofka Ugu Mushaarka Badan TV -ga | 2021
Qiimaha saafiga ah: $ 120M
Mushaharka: $ 28 Milyan
Noocyada: dabin, guriga korontada, EDM, hip hop
Steve Aoki ayaa ka mid ah DJ-yada ugu mushaarka badan adduunka waana DJ xirfadle Mareykan ah, soo-saare rikoodhe ah, maaweeliya, iyo fuliyaha muusigga.
Wuxuu caan ku yahay anshaxa shaqada iyo shaqo adag tanina waxay ku kasbatay taageerayaal badan oo daacad ah. Kuwa aan kor ku soo sheegnay ayaa isaga gooni uga dhigay inuu noqdo DJ ugu dadaalka badan liiska.
Waxaa jira qushuuc in muusikadiisa loo yaqaanno koronto, qallafsan, iyo madadaalo oo dhan.
Awood kasta oo loo kireeyo dhacdo, wuxuu kasbadaa ilaa $ 500,000, isagoo ka dhigaya mid ka mid ah DJ -yada ugu mushaharka badan bandhig kasta.
Marka loo eego liiska DJ mag ee 2018 ee 100 -ka DJ ee ugu sarreeya, Steve Aoki wuxuu galay kaalinta 11aad.
Qaar ka mid ah fannaaniinta uu la shaqeeyay waxaa ka mid ah Iggy Azalea, LMFAO, Lil Jon, BTS, iwm.
Isagu waa milkiilaha iyo aasaasaha sumadda diiwaanka, Dim Mak Records, oo uu aasaasay 1996. Summaddu waxay hoy u tahay fannaaniin badan oo ay ka mid yihiin ShayGray, Garmiani, Kenna, Scanners, iyo XTRMST.
Steven Aoki waa samafale maadaama uu yahay aasaasaha Steve Aoki Charitable Fund kaas oo taageera sababaha samafalka.
Dakhligiisa sanadlaha ah waxaa la geliyaa $ 28 Milyan.
Qiimaha saafiga ah: $ 85M
Mushaharka: $ 20M - $ 40M
Noocyada: Guriga korontada, guriga horumarsan, guriga, qoob-ka-ciyaarka, EDM.
Wuxuu ku dhashay kuna soo barbaaray Faransiiska, David Guetta waa DJ DJ Faransiis ah, soo saare rikoodhe ah, heesaa, iyo barnaamij muusig wuxuuna ka mid yahay EDM DJ ee ugu mushaarka badan adduunka.
Guetta waa hormuudka DJ ee warshadaha qoob -ka -ciyaarka ee Electronic Dance Music (EDM) waxaana loogu magac daray DJ -ga 1 -aad adduunka ku dhawaad ​​1.3 milyan oo qof.
Wuxuu iibiyey ku dhawaad ​​30 milyan oo heeso hal ah iyo 9 milyan oo album oo adduunka oo dhan ah taas oo ka dhigaysa inuu yahay ruug cadaa ku jira EDM DJ warshadaha.
2016, wuxuu ballan ka helay UEFA sida safiirkeeda muusigga ee UEFA Euro, taas oo heestiisa Midkan Adigaa leh oo lagu soo bandhigay Zara Larsson ayaa ahayd heesta rasmiga ah ee tartanka.
Wuxuu ku heesay heesaha xafladaha furitaanka iyo xidhitaanka ee Tartanka UEFA Euro.
Sanad walba, wuxuu kasbadaa inta u dhaxaysa $ 20M iyo $ 40M.
Qiimaha saafiga ah: $ 68M
Mushaharka: $ 45.5 Milyan
Noocyada: pop, EDM, electropop
Da'da: Alexander (34), Andrew (30)
Andrew Taggart iyo Alexander Pall waa labada qof ee Mareykanka ah ee loo yaqaan The Chainsmokers waxaana loo yaqaanaa mid ka mid ah DJ -yada EDM ee ugu mushaarka badan.
Labada nin ayaa loo magacaabay abaalmarino muusig oo kala duwan waxayna ku guuleysteen toddobo Billboard Music Awards, laba Abaalmarinta Muusikada Mareykanka, iyo hal Grammy Award. Waxay leeyihiin dakhli lagu qiyaasay $ 46M sanadkii.
Waxay la tacaalaan jockey disk iyo wax soo saarka duubista.
Chainsmokers -ka ayaa ah kuwa ugu jecel DJ -yada qaar ka mid ah taageerayaasha waxayna firfircoonayeen tan iyo 2012 laakiin waxay caan ku noqdeen 2014 ka dib markii ay sii daayeen heesta “#Selfie”. Heesta ayaa ka dhigtay inay noqoto mid ka mid ah 20ka qof ee ugu sarreeya kelmado badan, taasoo horseeday horumarkooda.
Goobaha kale ee ay labada nin sii daayeen waxaa ka mid ah “Ha I Dhimin”, “Roses” iyo “Ku Dhow”.
Labada ciyaaryahan ayaa ku guuleystay abaalmarinnada soo socda:
2 Abaalmarinta Muusikada Mareykanka,
7 Boodhadhka Muusikada Muusikada iyo
1 Abaalmarinta Grammy.
Qiimaha saafiga ah: $ 60M
Mushaharka: $ 10 Milyan
Noocyada: Guriga Nederland, dabin, guriga korontada, guriga horumarsan, guriga qol weyn, qoob-ka-cayaarka
Iyada oo leh magaca dhabta ah Nick van de Wall, Afrojack waa Dutch DJ iyo remixer. Afrojack wuxuu xirfadiisa ku bilaabay da'da qandaraaska ee 14 wuxuuna xiriir la lahaa warshadaha ilaa 2003. Wuxuu caan ku yahay soosaarka duubista, qorista heesaha, iyo barnaamijyada muusikada.
Wuxuu caan ku ahaa ka ciyaarista naadiyada iyo fagaarayaasha laakiin taa ka sokow, wuxuu la kaashaday fannaaniinta pop -ka sida Nicki Minaj iyo David Guetta.
Dakhligiisa sanadlaha ah waxaa la dhigaa $ 25M.
Afrojack waa DJ ku guuleysta abaalmarinta wuxuuna ku guuleystay Abaalmarinta Grammy ee 2011 ee Duubista Dib-u-habeynta ugu Fiican, Qeybta Aan Qabiilka ahayn.
Isagu waa Sarkaalka Sare ee LDH Europe wuxuuna leeyahay summad u gaar ah, Duubista Darbiga.
Wuxuu haystaa tiro sii -dayn ah oo ilaa hadda la sii daayay kuwaas oo ay ka mid yihiin “Bed of Roses” (2018) oo leh Stanaj iyo “Nolol Kale” oo uu ka muuqdo David Guetta 2017.
Sannadkii 2015, Afrojack wuxuu la soo saaray Guetta halkaas oo uu ka soo muuqday heesta David Guetta ee “Hey Mama”.
Akhri: Waa Kuwee Wariyayaasha Ugu Mushaharka Badan Caalamka | 2021
Qiimaha saafiga ah: $ 50M
Mushaharka: $ 20 Milyan
Noocyada: Guriga Electro, hip hop, pop, dancehall, dabin, Moombahton, EDM.
Iyada oo leh magaca dhabta ah, Thomas Wesley Pentz, oo si kalgacal leh loogu yaqaanno Diplo, waa muusikiiste Mareykan ah, DJ, curiyaha heesaha, iyo soo saare rikoodh wuxuuna ku dhashay Nofeembar 10, 1978, Tupelo, Mississippi, Mareykanka.
Waa xubin hormuud u ah MajorLazer oo wada-abuuray. Wuxuu sidoo kale xubin ka yahay Jack U (oo ay weheliyaan DJ Skrillex) iyo LSD (oo ay weheliyaan Sia & Labrinth) ayaa sidoo kale maamula shirkaddiisa sumadda u leh, Mad Decent.
Qaar ka mid ah fannaaniinta uu la shaqeeyay waxaa ka mid ah Justin Bieber, MØ, Usher, Bunny xun, Gwen Stefani, Chris Brown iyo kuwo kale.
Waxaa lagu qiimeeyay lambarka 17 ee darajada.
Wuxuu galay kaalinta 17 -aad 2018 Top 100 DJs by DJ Mag waxayna leedahay mushahar sanadle ah oo ku dhow $ 20 milyan.
Mushaharka: $ 13.5 Milyan
Noocyada: Guriga korontada, guriga horumarsan, guriga, guriga qoto dheer.
Wuxuu dhashay Febraayo 25, 1972, Ryan Gary Raddon, oo loo yaqaan Kaskade ee madadaalada madadaalada, waa DJ Mareykan wuxuuna caan ku yahay dib -u -habeynta iyo duubista wax soo saarka. Wuxuu caan ku yahay heeso badan oo garaacis ah oo uu sii daayay.
Kaskade wuxuu siidaayay halkiisii ​​ugu horreeyay, “Waxa Aan Sheego” 2001 waxaana majaladda Forbes ugu magac dartay DJ -ga 8 -aad ee ugu mushaarka badan adduunka, isagoo jeebka ku shubtay $ 17 milyan sanadkii 2014.
Wuxuu ku jiray ciyaarta ilaa 1989 wuxuuna sii daayay dhowr albums oo ay ka mid yihiin:
Jacayl dahsoon oo la sii daayay 2006, Automatic (2015) iyo kuwo kale.
Kaskade wuxuu sidoo kale ka mid ahaa dadka loo magacaabay abaalmarino badan oo ay ku jiraan 2017 iyo 2019 Grammy Awards.
Kaskade waa aabe dhalay saddex caruur ah wuxuuna sanadkii qaataa 14 milyan oo doolar.
Qiimaha saafiga ah: $ 45M
Mushaharka: $ 22 Milyan
Noocyada: guriga, guriga korontada, guriga horumarsan, dhammaystirka, EDM
Wuxuu ku dhashay Anton Zaslavski oo si layaab leh loogu yaqaan DJ Zedd, waa khabiir ku takhasusay Muusikada Qoob -ka -ciyaarka ee Elektaroonigga ah (EDM) waxaana ka mid ah DJ -yada EDM ee ugu mushaarka badan.
Isagoo ah DJ caan ah, wuxuu ka ciyaaraa goobo kala duwan wuxuuna u soo saaraa farshaxanleyda.
Waxaa lagu yaqaanaa habka muusikada gaarka ah wuxuuna la shaqeeyay qaar ka mid ah fannaaniinta EDM ee ugu caansan.
Da'diisu waa 31 jir, wuxuu leeyahay abaalmarin Grammy ah marka laga reebo muuqaalkiisa cajiibka ah, wuxuu leeyahay mid ka mid ah mushaharka ugu wanaagsan ee EDM DJ sida 2021.
Waxaa loo yaqaan DJ, soosaaraha duubista, curiyaha heesaha, iyo qalabka muusikada wuxuuna ku koray Jarmalka.
Qiimaha saafiga ah: $ 40M
Mushaharka: $ 23 Milyan
Noocyada: dabin, elektaroonik, guri horumarsan, baska mustaqbalka, soo boodka mustaqbalka
Xirfad ahaan loo yaqaan Marshmello, Christopher Comstock waa EDM DJ ee ugu mushaarka badan waana DJ American, soo saare rikoodhe ah, farshaxan muusig, iyo soo saare muusig elektaroonik ah.
Dib -u -habeyntiisii ​​uu la yeeshay DJ DJ Ameerika wuxuu ku kasbaday caan.
Qaar ka mid ah heesahiisa caanka ah, oo dhammaantood ka soo muuqday Billboard Hot 100 waxaana ka mid ah kuwan soo socda:
Tani EDM DJ wuxuu ku guuleystay wadar ahaan abaalmarino 5 ah oo ay ku jiraan 1 Abaalmarinta Muusikada Qoob -ka -ciyaarka ee 2019 iyo 1 MTV Europe Music Award ee 2018. Wuxuu ka dhigay liiska magacyada 18 jeer.
Marshmello waxay leedahay dakhli sanadeed ku dhawaad ​​$ 20M.
Qiimaha saafiga ah: $ 30M
Mushaharka: $ 12 Milyan
Noocyada: Guriga korontada, guriga horumarsan
Da'da: Axwell (42), Ingrosso (36)
Axwell & Ingrosso waa labada DJ ee Iswiidhishka ah, soosaarayaasha duubista, dib -u -habeeyayaasha, iyo fannaaniinta muusikada oo ka kooban xubnihii hore ee Mafia House Swedish.
Labada nin ayaa isugu yimid 2014 si ay u sii daayaan qaar ka mid ah heesaha caanka ah sida Markan, Waan ku jeclahay, Iyo Qorraxdu Waa Iftiin.
Axwell & Ingrosso waxaa loo magacaabay dhowr abaalmarin waxayna ku guuleysteen abaalmarinta Grammys ee 2018.
Jeegooda sanadlaha ah waxaa la dhigaa $ 12 milyan.
Waxay ku jireen 41 darajada ugu sarreysa 100 DJs ee DJ Mag ee 2018.
Qiimaha saafiga ah: $ 25M
Mushaharka: $ 11.5 Milyan
Noocyada: Guriga qoto dheer, downtempo, Guriga Kuleylaha, guriga horumarsan
Magaca dhabta ah ee Kygo waa Kyrre Gorvell-Dahl wuxuuna ka mid yahay DJ -yada EDM ee ugu mushaarka badan. Isagu waa farshaxaniiste muusig oo reer Norway ah wuxuuna caan ku yahay soo -saarista duubista, qorista heesaha, iyo DJ -ga.
Mid ka mid ah diiwaanada uu aadka u caanka yahay ayaa ah in uu sidoo kale hayo rikoorka adduunka ee ah in la gaaro 1 bilyan oo durdurrood oo Spotify ah.
Waqtigan xaadirka ah, dakhligiisa waxaa la dhigaa $ 11.5 milyan. Asal ahaan, ilaha dakhligiisu waa riwaayado iyo muusig.
Mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee Kygo uu ku dhuftay ilaa hadda waa aragtida in ka badan 76 milyan oo jeer oo dib -u -habeyntiisa heesta “Waan Arkaa Dabka” ee Ed Sheeran ku lahaa Youtube -ka wuxuuna ka helay in ka badan 54 milyan oo riwaayado SoundCloud. Tani waxay siisay dareen caalami ah.
Qiimaha saafiga ah: $ 22M
Mushaharka: $ 13 Milyan
Noocyada: Guriga Elektarooniga ah, guriga horumarsan, guriga Nederlandka, baska mustaqbalka, guriga qol weyn
Wuxuu ku dhashay May 14, 1996, Amstelveen, Netherlands, oo leh magaca dhabta ah Martijn Gerard Garritsen, waa mid ka mid ah kuwa ugu da'da yar, DJ-yada ugu mushaarka badan iyo soosaarayaasha rikoorka.
Martinrrix wuxuu shahaadada wax soo saarka ku leeyahay Utrecht oo uu ka qaatay Herman Brood Academy wuxuuna ka mid yahay DJ -yada ugu da'da yar uguna mushaarka badan adduunka.
Martinrrix wuxuu leeyahay summad u gaar ah oo lagu magacaabo Stmpd Rcrds halkaas oo fannaaniinta ay ka mid yihiin Dillon Francis, Syn Cole, Julian Jordan iyo kuwo kale ay ku qabtaan.
Dakhliga Martin Garrix waxaa lagu meeleeyay $ 13 milyan wuxuuna inta badan ka yimid muusikada iyo riwaayadaha DJing.
Martin wuxuu ku guuleystay abaalmarinta liiska ugu sarreeya 100 DJ ee DJ Mag muddo 3 sano oo xiriir ah laga bilaabo 2018 illaa 2019.
Qiimaha saafiga ah: $ 8M
Mushaharka: $ 11 Milyan
Noocyada: Dabin, hip hop, guriga Faransiiska, EDM
Waxaa loo yaqaanaa DJ Snake, William Sami Étienne Grigahcine waa fanaan Faransiis ah, DJ, iyo soo saare rikoodh wuxuuna ka mid yahay DJ -yada EDM ee ugu mushaarka badan.
DJ Snake wuxuu xiriir la lahaa sumadaha diiwaanka sumcad leh sida Mad Decent, Columbia, Interscope, Spinnin, iyo Premiere Classe.
Akhri: Waa kuma Ciyaaryahanka ugu mushaarka badan NBA -da? | 15 Ugu Fiican
15. Qaxwaha Madoow
Wuxuu ku dhashay Nkosinathi Maphumulo oo caan ku ah Black Coffee, wuxuu ka mid yahay DJ -yada EDM ee ugu mushaarka badan.
Wuxuu ka yimid Koonfur Afrika wuxuuna abuuray mid ka mid ah summadaha ugu waaweyn adduun ay ku badan yihiin West DJs.
Black Coffee waxaa lagu yaqaanaa qaababkiisa ciyaareed ee gaarka ah iyo kala duwanaanshaha jaadkiisa waana isaga kan DJ ugu madow ee ugu jaale badan.
Wuxuu leeyahay dakhli sanadeed waxaa la dhigaa inta u dhaxaysa $ 60k iyo $ 95k.
Su'aalaha badanaa la isweydiiyo (FAQs)
Intee in le'eg ayay EDM DJs sameeyaan hal gig?
Waa kuwee DJ-ga ugu mushaarka badan 2021?
DJ-ga ugu mushaarka badan sanadka 2021 waa Alexandra Sholler, oo u shaqeysa sidii Alison Wonderland, waa soo saare muusig qoob-ka-cayaarka elektaroonigga ah, DJ, iyo heesaa. Iyadu waa tan ugu wanaagsan uguna mushaarka badan DJ.
Ma adagtahay inaad noqoto EDM DJ?
Maya, ma aha wax adag inaad noqoto EDM DJ. Waxay qaadataa waxoogaa tababar ah, xiriiro yar, iyo, tan ugu muhiimsan, suuq -geyn wanaagsan.
EDM iyo DJ isku mid ma yihiin?
Maya, labadaas farqi ayaa u dhexeeya. Muusikada Qoob -ka -ciyaarka ee Elektiroonigga ah (EDM) waa nooc muusig ah Djing waa xirfad loo isticmaalo in muusikada loogu ciyaaro dhagaystayaasha. DJ wuxuu u taagan yahay Disc-jockey badiyaa waa kan gacanta ku haya dadka.
Waa kuma EDM DJ ee ugu mushaarka badan 2021?
The ugu mushaarka badan EDM DJ ee adduunka 2021 waa Calvin Harris.
Sidaad aragtay, doorka EDM DJ ee warshadaha madadaalada lama soo koobi karo maaddaama ay tahay mid muhiim ah.
Waxaad si fudud u bilaabi kartaa sida EDM DJ maadaama aysan ahayn wax adag inaad noqoto mid markaad raacdo tillaabooyinka hore loo taxay si dhammaystiran.
Waxaas oo dhan, ahaanshaha DJ EDM waa abaalmarin aad u fiican markaad ku fiicnaato ciyaarta. Marka, wax walba adiga ayay kugu xiran yihiin!
Qoraalka Dakhliga Pro Forma- Sidee bay u shaqaysaa?
Bayaanka dakhliga pro forma waa dukumeenti tusinaya dakhliga la hagaajiyay ee meheradda haddii qaar ka mid ah agabka maaliyadeed…